काबुलमा विस्फोट चारको मृत्यु ९० घाइते « Everestleaks – Nepal's Popular Digital NewsPaper
Afghan security forces gather at the site ofapowerful truck bomb attackaday after it detonated nearaforeign compound in Kabul on January 15, 2019. – The Taliban on January 15 claimed responsibility forapowerful truck bomb attack in Kabul that ripped through surrounding neighbourhoods, killing at least four people and wounding more than 100, in the latest assault on the Afghan capital. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP)
काबुल, १ माघ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परी चार व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ९० जना घाइते भएका छन् ।
घाइते भएकामा २३ जना बालबालिका पनि रहेका बताइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नाजिब दानिसले यस विस्फोटमा भएको हतहताको पुष्टि गर्नुभएको छ ।
काबुलमा सोमबार साँझ भएको एक विस्फोटमा परी चार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ– उनले बताएका छन् । विस्फोटबाट मारिएका ती व्यक्तिहरुमा तीन जना सैनिक र एक सर्वसाधारण रहेका छन् ।
सो विस्फोटमा परी २३ जना बालबालिकासहित ९० जना घाइते भएका छन् । घाइते भएकामा १२ महिला जना महिला पनि रहेका बताइएको छ । घाइते भएकामा पनि प्रायः सबैजना सार्वसाधारण नागारिक नै रहेका उक्त समाचारमा जनाइएको छ ।
सोमबार भएको यस विस्फोटको करिब एक घण्टापछि दानिसले गर्नुभएको ट्वीटमा यो जानकारी दिनु भएको हो । यस घटनामा संलग्नताको आशंकामा केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरिएको दानिसले बताउनु भएको छ ।
यस आक्रमणको हालसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन । तर पनि यसअघिका यस्तै आक्रमणहरुमा तालिबान र इस्लामिक स्ट्टेस जस्ता लडाकू समूहको हात रहदै आएकोले यस आक्रमणमा पनि तिनै समूहको हात भएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ ।
काबुल आक्रमणको जिम्मेवारी तालिबानले लियो
यसैबीच प्राप्त अर्काे एक समाचारमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार साँझ गराइएको बम विस्फोटको जिम्मेवारी तालिबान लडाकू समूहले लिएको छ ।
काबुलका सोमबार साँझ भएको एक विस्फोटमा परी चार व्यक्तिको मृत्यु हुनको साथै अन्य ९० जना घाइते भएका छन् । स्थानीय समयानुसार सोमबार साँझ ७ बजे शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराई ती व्यक्तिको हत्या गरिएको थियो ।